MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စဖို့ တရုတ်လိုလား
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စဖို့ တရုတ်လိုလား
တရုတ်နိုင်ငံကို လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ကို ပြန်လည်ရာက်လာတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံမှူးနဲ့အတူတွေ့ရပုံ
တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြောင်း တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတယ်လို့ ဒီကနေ့တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံကို ၁၀ ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးညီပုက ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ကူမင်းကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ကူမင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နောက် ပေကျင်းရောက်ခဲ့အရာမှာလည်း နိုင်ငံခြားရေးရာ ညွှန်ချုပ်တို့ ဘာတို့အပါအဝင်ပေ့ါ နောက်ဆုံး ဒုဝန်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ သူတို့ကတော့ မြစ်ဆုံကိစ္စပြောပါတယ်၊ မြစ်ဆုံကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေပြောတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပါတယ်"
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ တရုတ်ပြည်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်း အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၀င်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုလည်း အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးညီပုကို RFA သတင်းထောက် မသူဇာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
အသံဖိုင်နားထောင်ရန် မူရင်းလင့် (Click here)
at 5/18/2013 09:30:00 PM
▼ May 12 - May 19 (42)
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ...
နယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာ
KIO ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ စားနပ်ရိက...
အစိုးရနှင့် KIA တပ်များ ကွတ်ခိုင်-မူဆယ် ကြား တိုက်...
တွေ့ဆုံပွဲရက် ရွေ့ဆိုင်းပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားလာ...
Lahta Sam Mung, Mankawng Mayan Hta Hkrum Katut Gas...
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဒုဗိုလ် တဦ...
MAJAN WAN SHACHYI NA KUN? MAJAN WAN SHAZIM NA KUN?
ဝတပ်ဖွဲ့ - တရုတ် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေး
ကန်ပိုင်တီလမ်း တွင် အစိုးရစစ်အင်အား ထပ်ဖြည့်
(2) NING HPRING GASAT MAJAN MASA
ထိုင်းနိုင်ငံသား လီဆူး ၁၆ ဦး ကို UWSA ပြန်လွှတ်ပေး
ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေး ပါတီ အသစ်ပြန်ဖွဲ့မည်
Banma Kawng Gat Sa Lam Kaw Myen Asuya Balik (2) Ga...
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (Peace Process) ဖြင့်ြ...
ကချင် အဆိုတော်များ လိုင်ဇာဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အခမဲ့ ...
အကူညီနည်းလာခြင်းကြောင့် ဇီးလွန် ဒုက္ခသည်ကလေးများအတွ...
ဗမာစစ်တပ်မှ ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရွှေတူးဖော်
ဗမာစစ်တပ်မှ ပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်ဖျက်ကာ တပ်စခန်းတည်...
ဗမာစစ်ကြောင်းမှ ရွာသားတစ်ဦးကို ခုတ်သတ်ပြီး ချောင်း...
အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံဦးမည်
ခေတ်အဆက်ဆက်... တမျိုးပြီး တမျိုး မရိုးရအောင်...
ဂျပန် အစိုးရ အကူအညီ ရရေး UNFC ညှိနှိုင်း
Lahta Sam Mung, KIA Dap Ba (4) Ginra Ni Hta Matut ...
ခေတ်သစ် မြန်မာ့အရေး ပုံရိပ်လွှာ
မေ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်ဒေသ၊ ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာ၊ မ...
ဝါရာဇွတ် မီးဘေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကူညီရန် ပြည်နယ်...
နိုင်ငံရေး ကကြီး ခခွေး...